Muxuu ka yiri Cristiano Ronaldo, kaddib markii uu ku guuleytay abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa horyaalka Serie A? – Gool FM
Dajiye December 3, 2019
(Milan) 03 Dis 2019. Xiddiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa ka hadlay xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee horyaalka dalka talyaaniga, kaddib markii uu Bianconeri kaga soo biiray naadiga Real Madrid xagaagii 2018.
Cristiano ayaa xalay loo caleemo saaray abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa horyaalka Serie A xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, kaddib markii uu ku hogaamiyay Juventus inay ku guuleysato horyaalka Talyaaiga markii sideedaad oo xiriir ah.
Ronaldo ayaa kaddib markii loo caleemo saaray abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa horyaalka Serie wuxuu yiri:
“Waxaan isku dayi doonaa inaan ku hadlo afka talyaaniga, waan ku faraxsanahay inaan ahay ciyaaryahanka ugu fiican Talyaaniga”.
“Waxaan u mahadcelinayaa asxaabteyda kooxda iyo ciyaartoydii kale ee ii codeeysay, Kaddib markii aan ku ciyaaray gudaha Talyaaniga mudo labo sano ah, waxaan dhihi karaa waa horyaal aad u adag”.
“Waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo ii codeeysay, waxaana rajeynayaa inaan gaaro isla guushan oo kale sanadka soo socda”.
Waxaa suxid mudan in Cristiano Ronaldo uusan xalay xaadirin xafladii abaal-marinta Ballon d’Or oo ay bixisay majalada caanka ah ee France Football, si uu uga qeyb galo xafladii ka dhacday magalada Milan, isla markaana uu ku guddoomay abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa horyaalka Talyaaniga.
Macalin Ole Gunnar Solskjaer oo xaqiijiyay haddii uu Pogba diyaar u yahay kullanka habeen dambe ee Tottenham